‘सुसाईड नोट’ लेखेर बेपत्ता भएका डाक्टर काभ्रेमा भेटिए « Bagmati Page
काठमाडौं । भक्तपुरबाट बेपत्ता भएका अर्थोडोन्टिस्ट डा.दिगम्बर झा भेटिएका छन् । मङ्गलबार बिहान डा. झा सुसाईड नोट लेखेर बेपत्ता भएका थिए । काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका–१० स्थित ५५ किलोमा डाक्टरलाई फेला पारिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रवक्ता (डिएसपी) कुमार विक्रम थापाले बताए ।
डेन्टल क्लिनिकको माथिल्लो तलामा भाडामा बस्दै आएका डा. झा र उनको बुवाको सम्बन्ध राम्रो थिएन् । घरबाट निस्केको दुईघण्टामा उनी काभ्रे पुगेका थिए । पनौती हुँदै उनी दोलालघाट नजिक गएको प्रहरी अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । डा.झाले फेसबुक पेजमा सुसाईड नोट लेखेका थिए ।